အပြိုရညျပကျြတဲ့ည – My Blog
“ဟာ စိတျပကျြစရာပဲကှာ ဖုနျးဘလျေကလညျး ကုနျသှားပွနျပွီ” ရုံးပိတျရကျမို့ မိမိအိမျလေးထဲတှငျအေးဆေးစှာ အငျတာနကျ သုံး မညျဟု ကွုံးဝါးထားကာ သုံးတောငျမသုံးရသေးဘူး ဘလျေက ကုနျသှားသညျ။ မငျးမငျးခနျ့တယောကျရရှေတျရငျ ငှတေသောငျး ထုပျယူကာ ခပျလှမျးလှမျးကကုနျစုံဆိုငျလေးသို့ ထှကျလာခဲ့သညျ။ သူသညျ ဤရပျကှတျလေးသို့ ပွောငျးရှကေ့ာ ငှါးရမျး နထေိုငျသညျမှာ မကွာသေးပေ။ မနကျအလုပျသို့သှား ညပွနျအိပျမို့လညျး သူအား လူသိပျမသိပေ။ ခွံဝနျလေးနဲ့ တထပျတိုကျပုလေး က သူ့အတှကျ အပနျးဖွစေရာပငျ ဘေးပတျဝနျးကငျြမှ လူမြားလညျး အရောအနှော မလုပျသောကွောငျ့ သကျသောငျ့သကျသာရှိလှ သညျ။
ဖုနျငှဖွေညျ့ကဒျဝယျပွီး ပွနျအထှကျတှငျ အိုး လှလိုကျတာ သူရငျခုနျလောကျအောငျပငျ ကောငျမလေးမှာ လှရကျနိုငျလှနျးသညျ။ အိမျတှငျးအောငျလေးမို့ အသားရညျလေးမှာ ဝငျးဖနျ့ကာ မထူမပါးမကျြခုံလေးနှငျ့ မကျြနှာဝိုငျးလေးကို သူငေးကွညျ့မိတာ ဘယျလောကျကွာသှားသညျမသိ ကောငျမလေးမှာ “ဦး နညျးနညျးလောကျဖယျပေးပါလား ” ရှကျကို့ရှကျကနျးအသံလေးမှာ နားဝငျပီယံလှပသေညျ။ အိမျနရေငျး တပတျနှမျးလကျပွတျလေးနှငျ့ အရောငျအဆငျး မရှိတော့သော ထမီလေးနှငျ့ သူမ၏ခန်ဒာကိုယျ ကောကျကွောငျးလေးမြားကို အပိုအလိုမရှိစပေေ။ သူလညျး ပွနျထှကျမသှားသေးပဲ ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့နှငျ့ ဆိုငျမှ ပစ်စညျမြား အား ကိုငျကာ သူမလေးအား ခိုးရှိုးနတေော့သညျ။ ခဈြစရာသူမလေးပွနျထှကျမှ မသိမသာအနောကျက လိုကျကာ
“ညီမ ညီမ” အနောကျမှလှမျးချေါရာဝယျ “ရှငျ ဘာမေးမလို့လညျး ဟငျ” “ညီမက ဒီရပျကှတျထဲကပဲလား” “ဟုတျပါတယျ.. အဈကိုအိမျရဲ့ မကျြစောငျးထိုးသုံးအိမျကပါ” “ဟငျ ညီမက အဈကို့အိမျသိတယျ” “ခခြ ” ဟု သူမကရီရငျး “သိတာပေါ့ ညီမက ဒီမှာ မှေးကတညျးကနလောလေ ဒါပဲနျော အိမျရှရေ့ောကျနပွေီ အမတေို့သိရငျ ဆူလိမျ့မယျ” သူအားတကျသှားကာ ခွံရှမှေ့ပိတျရပျ ကာ “အဈကိုညီမလေးနဲ့ ဖုနျးပွောခငျြတယျ ဖုနျးနံပတျပေးပါလား” “အို သိမှမသိပဲနဲ့ မပေးပါဘူး” “ဒါဆိုလညျး ရတယျလေ အိမျ ထဲထိလိုကျတာပေါ့ ” ဟုသူပွောရငျး ကောငျမလေးရှမှေ့ ဖယျပေးလိုကျသညျ။
“မလုပျပါနဲ့ အိမျကဆူလိမျ့မယျ” “ဟ အဈကိုက လူရမျးကားမှမဟုတျတာ အိမျနီးနားခငျြးတှပေဲ ညီမအမတေို့နဲ့ဝငျမိတျဆကျတာ ပေါ့” ဟုပွောလိုကျရာ သူမတုနျလှုတျသှားကာ ဘာဆကျပွောရမှနျးမသိပေ။ ရငျထဲမှာလညျး လှိုကျမောလာကာ အိမျထဲထိ ဘာ ကွောငျမလိုကျစခေငျြလညျး သူမလညျးမစဉျးစားတတျတော့ပေ။ နောကျပွနျလှညျ့ကာ သူ့ရှသေို့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလှညျ့ကာ “တ ခါပဲပွောမယျနျော အိမျထဲထိမလိုကျနဲ့သိလား” သနားစရာမကျြဝနျလေးမြားကွောငျ့ သူခေါငျးငွိမျ့လိုကျသညျ။ ၀၉— ဟုပွေားရငျး ခွံတခါးပိတျကာ ပွေးဝငျသှားတော့သညျ။ မွသှေးရငျမြား တုနျရငျကာ အိမျထဲသို့ဟနျမပကျြ ဝငျလာသညျ။
”ညဉျးကလေ ခိုငျးလိုကျရငျတအားကွာတာပဲ” “အိုအမကေလညျး မကွာပါဘူး” ဟုပွောရငျး မိခငျဖွဈသူဝယျခိုငျးသော ပစ်စညျး မြားအားခကြာ မိမိအိပျခနျးတှငျးသို့ဝငျကာ အတှငျးမှခကျြခကြာ ကုတငျပျေါသို့ ပကျလကျလှနျလှညျးခရြငျး တုနျရငျနသေော ရငျဘတျအားလကျနှငျ့ဖိကာ မိမိတိတျတခိုးစှဲလမျးနရေသော အကိုကွီးမှာ ‘ဟှနျးတယောကျတညျး မကျြစောငျးထိုးကာ မုနျးဖို့ ကောငျးလိုကျတာ လူကိုကွညျ့နတောမြား တကိုယျလုံး ဖောကျထှကျမတတျပဲ။ ပွီးတော့ သူမြားအိမျရှထေိ့လိုကျလာပွီး ဖုနျးနံပတျ မရမက အတငျးပဲတောငျးသှားသေးတယျ၊ မုနျးဖို့ကောငျးလိုကျတာ သူမှတျကော မှတျမိပါ့မလား’ ဟုစိတျပူကာ မွသှေးတယောကျ ဖုနျးအားကောကျကိုငျကာ မကျဆဘေ့ောကျလေးအား ဖှငျ့ကွညျ့နမေိတော့သညျ။
“အယျ အခုမှသတိရတယျ” ဟု ရရှေတျရငျးဖုနျခလုပျမြားအားနှိပျကာ “နှဈသဈခဈြဦးရေ …. နှဈသဈခဈြဦးရေ…” ဖုနျးအသံလေး ကွောငျ့ အိခြောတယောကျ လနျ့ကာသှားမိတော့သညျ။ မိမိတယောကျတညျး လမျးထိပျက မမမွဆီက အပွာစာအုပျငှါးကာ ခိုးဖတျ နတေုနျး ဖုနျးသံကွောငျ့ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈကာ “အေး ပွောမွသှေး နငျကလညျး ဆယျတနျးစာမေးပှဲ ဖွပေီးကတညျးက ငါ့ ဆီဖုနျးတောငျ ဆကျဖျေါမရဘူး အခုဘာကိစ်စလညျး” “မမအိ ညီမလေးပွောစရာရှိတယျ” “အေးပွောလေ ” “ဟိုတယောကျလေ သိလား” “ဘယျတယောကျလညျး နငျ့ဟာက အစမရှိဘာမရှိနဲ့ ”
“မွသှေးပွောပွောနတေဲ့ ခပျခြောခြာလူကွီးလေး” ” အျောအေး သိပွီသိပွီ ဘာလညျး နငျ့ကိုဟိုက ဖငျလာနှိုကျသှားလို့လား” “ဟာ အဈမအိကလညျး ဘာမှနျးလညျးမသိဘူး” “ဟား.. ကောငျမလေး ရှကျသှားပွီ ပွောပွော” “အငျး ပွောမယျ အဲ့လူကွီးလေ………” ဟုအစခြီကာ ယနဖွေ့ဈပကျြသမြှအား တလုံးမကနျြ ပွောပွလိုကျလသေညျ။ “မွသှေး နငျတော့ အလိုးခံရတော့မယျ အားကြ တယျဟာ” “အယျ.. အမကလညျး ဘာစကားတုနျး” “ကောငျမ ခုမှလာရှကျမနနေဲ့ ညညျးခံခငျြနတော ငါသိတာပေါ့”
သူမရှကျရှကျဖွငျ့ ဖုနျးခလြိုကျလသေညျ။ ပါစပျမှလညျး ပှစိပှစိနှငျ့ အပြိုကွီးလငျအမွနျရသှားမှအေးမှာ။ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါပပမှာ သမီးဖွဈသူအား လှမျးချေါကာ မွသှေးနှငျ့ ဒျေါပပ နှဈဦးသား ထမငျးစားကွလသေညျ။ ဒျေါပပလညျး ကဆြငျးလာသော စီပှားရေး အခွအေနကွေောငျ့ ယခငျလို အသုံးအစှဲမကွီးတော့ပဲ ခြိုးခွံခြှတောကာ မိမိခငျပှနျးရှိစဉျက ကိုယျပိုငျ အငှါးကားလေးအား ခငျပှနျး၏တပညျရငျး အေးမောငျအား နစေ့ဉျပေးစနဈဖွငျ့ပငျ ငှါးရမျးကာ နထေိုငျစားသောကျရသညျ။ ကားမှာလညျး အိုနှမျးကာ ဟိုဟာပကျြလိုကျ ဒီဟာပကျြလိုကျနှငျ့ စားဖို့တောငျ အနိုငျနိုငျပငျ။
မငျးမငျးခနျ့တယောကျ ရှငျလနျးတကျကွှစှာဖွငျ့ မှတျသားလာသော ဖုနျးနံပတျအား ဖုနျအတှငျရိုကျထညျ့ကာ သူမလေးအား ‘အရမျး ခဈြသှားပွီ ခြာတိတျရယျ’ ဟု မကျဆပေို့လိုကျလသေညျ။ သူမလေးဟု မှတျသားထားလသေညျ။ မွသှေး၏ နာမညျကို သူမမေး လိုကျခွငျအား တကိုယျတညျး ရရှေတျကာ ဘာပဲဖဈဖွဈ ဖုနျးနံပတျရခဲ့ပွီပဲ ဟု ကနြေပျကာ ကဗြာတိုလေးမြား ပနျးပှငျ့လေးမြားအား သူမအား ဆကျသရနျ ရှာဖှနေတေော့သညျ။
အခြိနျမညျမြှကွာသှားသညျမသိ ဝမျးဗိုကျမှ ဆာလောငျမှတျသိတျမှုဝဒေနာကွောငျ့ ဟငျးမခကျြနိုငျတော့ပဲ အသငျ့စား အမဲသားနှပျ ဗူးအားဖောကျကာ ထမငျးနှငျ့ စားသောကျလိုကျတော့သညျ။ ထမငျးစားပွီးသညျနှငျ့ အားသှငျးထားသောဖုနျအားဖွုတျကာ ‘ခြာတိတျလေး သတိရနတေယျ၊ ခြာတိတျ ဘာလုပျ၊ ကိုယျ့ကို ဘာလို့စာမပွနျရတာလညျး ခြာတိတျရယျ’ သူမနနေိုငျဖွဈကာ သူမ လေးထံသို့ ဖုနျးချေါလိုကျတော့သညျ။ “နငျထားခဲ့မှာလား နငျရကျစကျစကျမှာလားလေ…” ဝိုငျးလေးရဲ့ သီခငျြးတေးသှားလေး ကွောငျ့ သူပငျ စိတျမကောငျးဖွဈကာ ဘာကို လှမျးလို့လှမျးမှနျပငျ မသိဖွဈမိသညျ။ ဇှဲမလြှော့ပဲ ဒုတိသအကွိမျ ဆကျချေါရာတှငျ တော့ ခြိုသာသောအသံလေးကွောငျ့ သူပြျောမိသှားတော့သညျ။
“ဟဲလို ” “ညီမလေး အဈကိုယျ့ကိုမှတျမိလား” “အမမေအိပျသေးဘူး ဒါပဲနျော” “ဒါဆို မကျဆပွေ့နျပို့လေ နျော နျော” တဘကျမှ တိတျဆိတျသှားကာ ခဏအကွာတှငျတော့ သကျပွငျးခသြံနှငျ့အတူ ညှိုးငယျသော အသံလေးဖွငျ့ “ဘလျေမရှိလို့ပါ ကိုကွီးရယျ” ဟု ပွေားရငျး ဖုနျးခသြှားတော့သညျ။ သူအရမျးပငျ သနားသှားကာ ခကျြခငျြးပငျ သူမဖုနျးလေးထဲသို့ ငှငေါးထောငျ လှမျးလှဲ ပေးလိုကျလတေော့သညျ။ ထို့နောကျ ‘အရမျးခဈြမိသှားလို့ပါ ညီမလေးရယျ တမြိုးမထငျပါနဲ့’ ဟု မကျဆပေို့လိုကျလတေော့သညျ။
မွလေးတယောကျ ပြျောရမညျလော ဝမျးနညျးရမညျလော ဝခှေဲမရဖွဈနတေော့သညျ။ မိမိတဘကျသကျ ကွိတျကာ သဘောကနြေ သော ခဈြကိုကွီးဆီမှ ဂရုစိုကျ တနျးဖိုးထားမှုခံရခွငျးအတှကျ ဝမျးသာပီတိဖွဈမိရသျောလညျး မိမိဘဝအတှကျ ဝမျးနညျးကာ သိမျငယျနမေိတော့သညျ။ ထို့နောကျတှငျ အခြိနျသိပျမကွာလိုကျပဲ သူမတို့နှဈယောကျ ခဈြသူဖွဈသှားလတေော့သညျ။ ခဈြသူဖွဈခဲ့ သညျမှာ နှဈလပငျပွညျတော့မညျ အပွငျမှာတကွိမျမှ ခဈြသူနှငျ့ တှခှေ့ငျ့မရပဲ သူမ၏ပါးလေးအား နမျးခှငျ့မရရှိသေးပေ။ “ဟဲလို အဈမ ပပ လားခငျဗြ” “အမရေေ ဖုနျးလာနတေယျ ဦးအေးမောငျဆီက” ဟုပွောရငျး ထမငျးဟငျးခကျြနသေောမိခငျထံသို့ ဖုနျး အားသှားပေးကာ အနားတှငျရပျကာ အသာနားစှငျ့နတေော့သညျ။
ဒျေါပပလညျး စိတျပူသှားကာ ယခုလို အခြိနျ အေးမောငျတခါမြှ ဖုနျးမဆကျဖူးခြေ ကားတခုခုဖွဈတာပဲဟု တထဈခတြှကျကာ ပူပနျမိတော့သညျ။ မိမိတို့စားဝတျနရေေးမှ ဤကားလေးကွောငျ့သာ “အေးမောငျ ပွောလေ ဘာဖွဈလို့လညျး” ဟုစိုးရိမျစှာဖွငျ့မေးလသေညျ။ တဘကျမှလညျး “အဈမ ကနြျောသထုံကို လူသှားပို့ပွီး အပွနျမှာ ရပျထားတဲ့ဆိုငျကယျကို တိုကျမိလို့ ကနြေျာ့ကို ကြိုကျထိုရဲစခနျးမှာ ကားရောလူရော အဖမျးခံထားရလို့ ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျ လာရောကျထုပျယူပါဆိုလို့ အဈမဆီ ဖုနျးဆကျရတာ အဈမရယျ ကနြေျာ့ကို ခုခကျြခငျြးလာချေါပါနျော နျော အဈမ”
ပွောကာ ဖုနျးခသြှားလတေော့သညျ။ လကျထဲတှငျ ရှိစုမဲ့စုငှလေေးအား ယူကာ သမီးအား စိတျမခနြိုငျပဲတဖှဖှမှာကာ ကြိုကျထိုသို့ ခကျြခငျြးပငျဆငျးလာတော့သညျ။ စခနျးရောကျသျော အေးမောငျအား အာမခံဖွငျ့ထုပျလို့ရသျောလညျး ကားမှာ မနကျတရားရုံး တှငျ ဒဏျငှဆေောငျပွီမှ ထုပျယူခှငျ့ရမညျ ဖွဈသောကွောငျ့ ဘယျလိုမှပငျ ပွနျလို့မရတော့ခယြေ။ သမီးဖွဈသူအား အကြိုးအကွောငျးဖုနျးဆကျကာ လှမျးပွောလိုကျလတေော့သညျ။ “ကိုကို မမေေ ဒီည ပွနျမလာနိုငျတော့ဘူးတဲ့ မွသှေးကွောကျ တယျ ကိုကိုရယျ”
မွငျလိုကျရသော မကျဆကွေ့ောငျ့ သူအရမျးပငျ ပြျောသှားမိတော့သညျ။ အလုပျမှပွနျရောကျကာစမို့ ရမေိုးခြိုးကာ ထမငျးပငျမစား နိုငျတော့ပဲ ငှသေား သုံးသိနျးယူကာ သူမလေးအိမျသို့ ထှကျလာလတေော့သညျ။ အခြိနျအားဖွငျ့ ညကိုးနားရီဖွဈသောကွောငျ့ လူသှားလူလာပငျ မရှိတော့ခြေ။ ခွံတခါးအား မိမိဘာသာဖှငျ့ကာပငျ အေးအေးလူလူ သူမအိမျလေးထဲသို့ ဝငျလာခဲ့တော့သညျ။ တ ခါးဝတှငျ အသငျ့ကွိုနသေော ခဈြသူလေးအား ခါးမှဆှဲဖတျကာ အနမျးမိုးမြား အဆကျမပွတျ ရှာခလြိုကျတော့သညျ။ မွသှေးမှာ ဗ လောငျဆူနသေောရငျအား ထိနျးကာပငျ “အို ဘယျလိုဖွဈနတောလညျးကိုကိုရယျ သူမြားတှေ မွငျကုနျမှဖွငျ့ မသငျ့တျောပါဘူး ကှယျ”
ပွောလညျးပွော လကျမှလညျးတှနျးကနျကာ အခနျးတှငျးသို့ ဝငျပွေးသှားတော့လသေညျ။ မငျးမငျးခနျ့လညျး အိမျရှတေ့ခါးအား ပိတျကာကိုယျ့အိမျကိုယျယာလို သဘောထားကာ သူမလေး အခနျးတှငျးသို့ ဝငျခဲ့လတေော့သညျ။ မွသှေးလညျးရှကျလှနျးလို့ စောငျ ခေါငျမွှီးခွုံကာ နမေိသညျ။ သူသညျ သူမကုတငျပျေါသို့ညှငျသာစှာထိုငျရငျး “ခဈြလေး ထဦး ကိုကိုပွောစရာရှိတယျ” ဟုပွောရငျး စောငျအားအသာဆှဲယူလိုကျတော့သညျ။ “ရော့ ဒီမှာ ခဈြလေးမမေေ အမှုကိစ်စအတှကျ ယူထားလိုကျနျော” “အို မယူရဲပါဘူး ပေးခငျြမနကျကမြှလိုကျသှားပွီး ကိုယျဘာသာပေးပေါ့”
“အငျးလေ သှားကွတာပေါ့ ခုတော့ သူ့သမီးလေးကို အမကေို့ ယျစာစောငျ့ရှောကျရဦးမယျ” ပွောလညျးပွော ဖတျလညျးဖတျကာ မွသှေးနှုတျခမျးလေးအား ငုံခဲလြှကျ ခဈြရညျဖွာသော မကျြလုံးရှဲကွီးမြားအား စိုကျကွညျ့ရငျး နှဈကိုယျတူ အသံတိတျစကားမြား ပွောနကွေသညျ။ ၁၈ နှဈ ပွညျ့ရနျ လပိုငျးသာလိုသေးသော အပြိုဖျေါဝငျကာစ မွသှေး ရငျအစုံပျေါသို့ သူ့လကျခြောငျးလေးမြားက ဖှဖှအုပျကာ ပှတျသကျကြီစယျမှုကို မွသှေးခငျဗြာ အူထဲအသညျးထဲကပငျ လှိုကျဖိုမောနမေိတော့သညျ။
“အို…. ကိုကိုရယျ မွသှေး ရငျတှတေုနျလိုကျတာကှယျ” “အခဈြလေး … ဘာမှမဖွဈစရေပါဘူး ကိုကို တာဝနျယူပါတယျ” “မွ သှေးကွောကျတယျ..” “မကွောကျပါနဲ့ အစပိုငျးလေးပဲ နညျးနညျးလေးနာမှာပါ” ဟု ပွောလညျးပွော အမှေးကွဲလေး အနညျးငယျ သာ ပေါကျနသေော ဖုတျဖုတျလေးအား ပလြှေော့နသေော ထမီကွားက လကျခြောငျးကလေးမြားနှငျ့ အထကျအောကျ စုနျဆနျကာ ပှတျသတျနတေော့သညျ။ “အား….. ကိုကိုရယျ မွသှေးလေ ယှစိယှစိနဲ့ ဘာတှဖွေဈနမှေနျးမသိတော့ဘူး ကိုကိုရယျ ..” “ဘာမှမ ဖွဈဘူး မကျြလုံးလေးအသာမှိတျထား သိလား …”
“ဟုတျကဲ့ ကိုကို …” “လိမ်မာလိုကျတာ အခဈြလေးရယျ ” တလှာခငျြးဆီ ခြှတျခထြားသော အဝတျမဲ့ မွသှေးခန်ဒာအား နို့သီးမှ စုနျ ဆငျးကာ မို့မို့ဖောငျးနသေော ဖုတျဖုတျလေးရဲ့ အကျကှဲကွောငျးလေးကို လြှာထိပျကလေးနှငျ့ “အား…. ရှီးး…ကိုကို ဘာလုပျနတော လညျး မွသှေး မခံနိုငျတော့ဘူးကိုကိုရယျ … လိုးမှာဖွငျ့လိုးပါတော့ မွသှေးဟာလေး ကှဲရငျကှဲသှား စမျးပါစေ ကိုကိုရယျ ထိုးထညျ့ လိုကျပါတော့ …” “မလေားနဲ့လေ အခဈြရယျ ခဏလေးပါ နျော ” “အား… ရှီး….” ရှာထိပျလေးပငျမက လြှာအပွားလိုကျပငျ အထကျအောကျ ဘေးဘယျမကနျြ လြှကျပေးရငျး သူမ စောကျရညျအား တဂှတျဂှတျနှငျ့ မြိုခပြလိုကျသညျ။ မကျြနှာတခုလုံးလညျး ပကြေံနသေောကွောငျ့ ရခြေိုးခနျးသို့ဝငျကာ မကျြနှာသဈလိုကျသညျ။
မိမိတောငျမတျနသေောစံခြိနျမှီ လီးအား ပွောငျနအေောငျရထေကျဆေးလိုကျသညျ။ ကုတငျပျေါတှငျ ကိုယျဗလာနှငျ့ နုံးခှနေေ သော သူမအားကွညျ့ကာ လီးမှာတောငျသထကျ တောငျလာတော့သညျ။ “အခဈြကလေး ထ ကိုကိုလီးလညျး စုပျပေးဦးလေ” “ဟငျ မွသှေးမှ မစုပျတတျတာ ကိုကိုရယျ” “လာ ကိုကိုသငျပေးမှာပေါ့” သူမလကျညှိုးလေးအား နမူနာစုပျပွကာ နှုတျခမျးဝ လေးအား လီးဖွငျ့တထေ့ားလိုကျသညျ။ သူမသညျ ယခုမှပငျလီးအား သခြောမွငျဖူးတော့သညျ။ စောစောက ကုနျခမျးသှားသော အားအငျမြားခကျြခငျြးပွညျ့ဝလာကာ ကိုကို စိတျကနြေပျအောငျပငျမကပဲ စတေနာပါပါဖွငျ့ အားရပါးစုပျပေးနမေိတော့သညျ။
“အား….အား….ကောငျးလိုကျတာ မွသှေးလေးရယျ အား… ကိုကို မရတော့ဘူး မွသှေး ပကျလကျလှနျပွီး အဖုတျလေး ဖွဲထားပေး နျော” အခဈြစိတျနှငျ့ ကာမစိတျပေါငျးစပျမှုကွောငျ့ အပြိုလေးမှာ မရှကျကွောကျတော့ပဲ ပေါငျနှဈဖကျကားကာ မိမိအဖုတျလေး အား လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဆှဲထားသညျ။ မှိုဖူးကွီးပမာ မငျးမငျးလီးကွီလညျ သူမဖုတျလေးအား အထကျအောကျပှတျရငျး သူမအရညျ ကွညျလေးမြားအား လီးထိပျကိုစိုရှဲလာသညျနှငျ့ တဖွေးဖွေးခငျြးဖိသှငျးရာ “အား….ကိုကို မဆံ့ဘူးထငျတယျ” ပူနှေးနှေးလီခြောငျ ကွီးကွောငျ့လနျသှားကာ နှုတျမှလညျး စိုးရိမျကာ တဖှဖှပွောနတေော့သညျ။
“အား…” သူလညျး ခဏမှေးကာ “ခဈြလေး…” “ရှငျ ကိုကို ” “ဟိုစကားပုံကွာဖူးလား ခေါငျးဝငျကိုယျဆံတယျဆိုတာလေ” “ဟုတျ ကွားဖူးပါတယျ ” သူလှဲလိုကျသော အာရုံအား သူမအပွညျ့အဝပါလာသညျနှငျ့ အပြိုမှေးလေးအား လိုးခှဲကာ လီးတဆုံး ပငျ ထိုးစိုကျထားလိုကျသညျ။ “အမလေး… အမရေေ….သပေါပွီး….အား …နာတယျ နာတယျ” သှေးရူးသှတေမျးဖွငျ့ ထအျော သောမွသှေားပါစပျအား ဘယျလကျဖွငျ့ အသာဖိပိတျကာ “အရမျးမအျောရဘူးလေ သူမြားတှကွေားကုနျမှာပေါ့” မကျြရညျမြား ကွားက သူ့အားမျောကွညျ့ရငျး “အရမျးနာတာကို ခဈြလေးကိုခဈြရငျ ပွနျထုပျလိုကျပါနျော နျော..” ငိုမဲ့မဲ့အသံလေးနှငျ့ပွောနေ တော့သညျ။
“ခဏလေး ခဈြလေး ခဏပဲ မယုံကွညျ့နေ ကိုကိုလှုပျပွမယျ မနာတော့ဘူးသိလား ” ပွောလညျးပွော နိုးသီးလေးအား ကုနျအစို့ ခါး ကုနျလိုကျသညျမို့ လီးမှာ လကျနှဈလုံးခနျ့ ပွနျထှကျသှားပွီး သားအိမျထဲ မွှုတျနသေော လီးထိပျမှာ အနောကျဆို့ဆုတျသှားပွီး သာ အိမျဝအား မထိတထိ လှုတျကစားနမှေုကွောငျ့ နာကငျြသညျ့ဝဒေနာသကျသာကာ သူ့လီးအား အတှငျးမှ ပွနျကာပငျ ညှဈနမေိ တော့သညျ။ နိုးနှဈလုံးအား လှညျ့ပွောငျးစုပျယူမှုကလညျး သူမအားပို၍ပငျ အရသာရှိလှသညျ။ စောစောက နာကငျြမှုသညျ။ တကယျမြားရော ဟုတျပါလစေပငျ ဖုတျဖုတျတှငျးမှလညျး နာလညျမှုရကာ ရှတေို့းနောကျငငျ့ တဖွေးဖွေး မှနျမှနျလေးလုပျပေးလာ ရာ “အားး…အငျး…ကြှတျဈ… အီး….” အဆုံးထိဝငျသညျ့အခြိနျတှငျတော့
“အု. အငျး….. အား…” အရှိနျလေးရလာကာ အရညျ ကွညျလေးမြားကွောငျ့ အှငျးနံရံသား အပွညျ့အဝပှတျမိနသေျောလညျး နာကငျြမှုမှာ သိပျမသိသာတော့ပဲ တခါတခါ ခံလို့ပငျ ကောငျးသောကွောငျ့ ခါးလေးပငျကော့လာတော့သညျ။ နှုတျမှလညျး တိုးညှငျးစှာ “အား….အငျး..ဟငျး..ရှီး.. အား.. အငျး..ရှီး…အ ဟငျး…အဟငျး….. ကိုကိုရယျ ခံလို့ကောငျးလိုကျတာ အရမျးခဈြသှား သိလား” မငျမငျးခနျ့လညျး အပြိုလေးရဲ့ အခံကောငျးမှု ကွောငျး လီးထိပျတခုလုံး ကငျြတကျကာ အခကျြလေးဆယျလကျေ မှာပငျ သုတျရညျမြား သူမအတှငျးနံရံမြားသို့ ပနျးထုပျလိုကျလေ တော့သညျ။ ခံလို့ကောငျးနတေုနျမှာ ပူနှေးနှေး သုတျရညျမြားကွောငျ့ မငျးမငျးအား သိုငျးဖတျကာ ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျ ဖွဈပွီး လောကရဲ့ အထူးကဲဆုံး ဘာနဲ့မြှ မလဲနိုငျသော ပွီးဆုံးခွငျးကာမပနျးတိုငျသို့ တကျလှမျးနိုငျတောလသေညျ။
မငျးမငျးခနျ့လညျး သူမပျေါမှာပငျမှိနျးရငျး အနာယူနသေညျ။ ပွီဆုံးခွငျးရောကျသှားသော ပိပိလေး၏ ကွှကျသားမြားမှာ ပှစိပှစိဖွဈ နသေောကွောငျ့ သုတျရညျထှကျသျောလညျး အနညျးငယျသာပြော့နသေောလီးအား ဆှဲကာဆှဲကာ ညှဈနသေောကွောငျ့ လီးမှာတ ဖွေးဖွေးနှငျ့ အားအငျပွညျ့ဖွိုးလာကာ သံခြောငျးပမှာမာတောငျလာပွီး ခါးလေးလှုပျကာ နှုတျခမျးအား နမျးရငျ ဒုတိယအခြီစနေ တော့သညျ။ အရှိနျလေးရလာသညျနှငျ့ “ခဈြလေး ခံနိုငျလာပွီလား” “ဟုတျကိုကို…နညျးနညျးလေးတော့နားသေးတယျ” “အငျးပါ အရမျးကွီးဆောငျ့မလိုးသေးဘူး” “ဟုတျကိုကို ” အခကျြ နှဈဆယျလကျေ ပုံမှနျလိုးရငျးဖွငျ့ သူမအား လေးဘကျထောကျစေ ပွီး အနောကျမှနေ၍ သူမဖငျလုံးလေးအား လကျနှဈဖကျဖွငျ့ပှတျသတျရငျး ဆုတျနယျရငျး အားရပါးရဆောငျ့လရော “အား…အု. အား… ရှီး…အား…… ဟငျး….. ကိုကိုရယျ ဘယျလိုမြားလိုးနတောလညျး”
ခံကောငျးကောငျးနှငျ့ ဖငျလေးပငျပွနျကော့နမေိရာ လိုးကောငျးကောငျနှငျ သူလညျး လိုးလိုကျတာ ည ၂ နာရီပငျထိုးသှားသညျ။ သူ လညျးမောပနျးလာသောကွောငျ့ အားရပါးရ အခကျြ၂၀ ခနျ့လိုးဆောငျ့ရာ ပွီးဆုံးခွငျး ကာမပနျးတိုငျသို့ ရောကျရှိလတေော့သညျ။ နှဈဦးသား ငယျရှယျသူမြားမို့ သှေးသားဆူဖွိုးကာ ပငျပနျးနှမျနယျမှု မရှိလပေဲ ခဏသာမြှမှေးစကျကာ ငါးနာရီလောကျ တခြီထဆှဲပီး ရမေိုးခြိုးကာ နံနကျစာ စားသောကျကွသညျ။ မငျးမငျးခနျ့လညျး အိမျသို့ပွနျကာ ငှေးငါးသိနျးအားထပျယူကာ ဒျေါပပ တို့ရှိရာ သို့ လိုကျလာလတေော့သညျ။ ဒျေါပပလညျး သမီးခြောလေးမှာ ငယျသေးသျောလညျး မိမိအခကျအခဲအား မငျးမငျးခနျ့ငှနှေငျ့မှ သာလြှငျ အဆငျပွခြေောမှမေ့ညျ မဟုတျပါလား…။ ။ ပွီးပါပွီ….။
“ဟာ စိတ်ပျက်စရာပဲကွာ ဖုန်းဘေလ်ကလည်း ကုန်သွားပြန်ပြီ” ရုံးပိတ်ရက်မို့ မိမိအိမ်လေးထဲတွင်အေးဆေးစွာ အင်တာနက် သုံး မည်ဟု ကြုံးဝါးထားကာ သုံးတောင်မသုံးရသေးဘူး ဘေလ်က ကုန်သွားသည်။ မင်းမင်းခန့်တယောက်ရေရွတ်ရင် ငွေတသောင်း ထုပ်ယူကာ ခပ်လှမ်းလှမ်းကကုန်စုံဆိုင်လေးသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူသည် ဤရပ်ကွတ်လေးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ငှါးရမ်း နေထိုင်သည်မှာ မကြာသေးပေ။ မနက်အလုပ်သို့သွား ညပြန်အိပ်မို့လည်း သူအား လူသိပ်မသိပေ။ ခြံဝန်လေးနဲ့ တထပ်တိုက်ပုလေး က သူ့အတွက် အပန်းဖြေစရာပင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများလည်း အရောအနှော မလုပ်သောကြောင့် သက်သောင့်သက်သာရှိလှ သည်။
ဖုန်ငွေဖြည့်ကဒ်ဝယ်ပြီး ပြန်အထွက်တွင် အိုး လှလိုက်တာ သူရင်ခုန်လောက်အောင်ပင် ကောင်မလေးမှာ လှရက်နိုင်လွန်းသည်။ အိမ်တွင်းအောင်လေးမို့ အသားရည်လေးမှာ ဝင်းဖန့်ကာ မထူမပါးမျက်ခုံလေးနှင့် မျက်နှာဝိုင်းလေးကို သူငေးကြည့်မိတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ ကောင်မလေးမှာ “ဦး နည်းနည်းလောက်ဖယ်ပေးပါလား ” ရှက်ကို့ရှက်ကန်းအသံလေးမှာ နားဝင်ပီယံလှပေသည်။ အိမ်နေရင်း တပတ်နွမ်းလက်ပြတ်လေးနှင့် အရောင်အဆင်း မရှိတော့သော ထမီလေးနှင့် သူမ၏ခန္ဒာကိုယ် ကောက်ကြောင်းလေးများကို အပိုအလိုမရှိစေပေ။ သူလည်း ပြန်ထွက်မသွားသေးပဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နှင့် ဆိုင်မှ ပစ္စည်များ အား ကိုင်ကာ သူမလေးအား ခိုးရှိုးနေတော့သည်။ ချစ်စရာသူမလေးပြန်ထွက်မှ မသိမသာအနောက်က လိုက်ကာ
“ညီမ ညီမ” အနောက်မှလှမ်းခေါ်ရာဝယ် “ရှင် ဘာမေးမလို့လည်း ဟင်” “ညီမက ဒီရပ်ကွတ်ထဲကပဲလား” “ဟုတ်ပါတယ်.. အစ်ကိုအိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးသုံးအိမ်ကပါ” “ဟင် ညီမက အစ်ကို့အိမ်သိတယ်” “ချချ ” ဟု သူမကရီရင်း “သိတာပေါ့ ညီမက ဒီမှာ မွေးကတည်းကနေလာလေ ဒါပဲနော် အိမ်ရှေ့ရောက်နေပြီ အမေတို့သိရင် ဆူလိမ့်မယ်” သူအားတက်သွားကာ ခြံရှေ့မှပိတ်ရပ် ကာ “အစ်ကိုညီမလေးနဲ့ ဖုန်းပြောချင်တယ် ဖုန်းနံပတ်ပေးပါလား” “အို သိမှမသိပဲနဲ့ မပေးပါဘူး” “ဒါဆိုလည်း ရတယ်လေ အိမ် ထဲထိလိုက်တာပေါ့ ” ဟုသူပြောရင်း ကောင်မလေးရှေ့မှ ဖယ်ပေးလိုက်သည်။
“မလုပ်ပါနဲ့ အိမ်ကဆူလိမ့်မယ်” “ဟ အစ်ကိုက လူရမ်းကားမှမဟုတ်တာ အိမ်နီးနားချင်းတွေပဲ ညီမအမေတို့နဲ့ဝင်မိတ်ဆက်တာ ပေါ့” ဟုပြောလိုက်ရာ သူမတုန်လှုတ်သွားကာ ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိပေ။ ရင်ထဲမှာလည်း လှိုက်မောလာကာ အိမ်ထဲထိ ဘာ ကြောင်မလိုက်စေချင်လည်း သူမလည်းမစဉ်းစားတတ်တော့ပေ။ နောက်ပြန်လှည့်ကာ သူ့ရှေ့သို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်ကာ “တ ခါပဲပြောမယ်နော် အိမ်ထဲထိမလိုက်နဲ့သိလား” သနားစရာမျက်ဝန်လေးများကြောင့် သူခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည်။ ၀၉— ဟုပြေားရင်း ခြံတခါးပိတ်ကာ ပြေးဝင်သွားတော့သည်။ မြသွေးရင်များ တုန်ရင်ကာ အိမ်ထဲသို့ဟန်မပျက် ဝင်လာသည်။
”ညဉ်းကလေ ခိုင်းလိုက်ရင်တအားကြာတာပဲ” “အိုအမေကလည်း မကြာပါဘူး” ဟုပြောရင်း မိခင်ဖြစ်သူဝယ်ခိုင်းသော ပစ္စည်း များအားချကာ မိမိအိပ်ခန်းတွင်းသို့ဝင်ကာ အတွင်းမှချက်ချကာ ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်လှည်းချရင်း တုန်ရင်နေသော ရင်ဘတ်အားလက်နှင့်ဖိကာ မိမိတိတ်တခိုးစွဲလမ်းနေရသော အကိုကြီးမှာ ‘ဟွန်းတယောက်တည်း မျက်စောင်းထိုးကာ မုန်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ လူကိုကြည့်နေတာများ တကိုယ်လုံး ဖောက်ထွက်မတတ်ပဲ။ ပြီးတော့ သူများအိမ်ရှေ့ထိလိုက်လာပြီး ဖုန်းနံပတ် မရမက အတင်းပဲတောင်းသွားသေးတယ်၊ မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ သူမှတ်ကော မှတ်မိပါ့မလား’ ဟုစိတ်ပူကာ မြသွေးတယောက် ဖုန်းအားကောက်ကိုင်ကာ မက်ဆေ့ဘောက်လေးအား ဖွင့်ကြည့်နေမိတော့သည်။
“အယ် အခုမှသတိရတယ်” ဟု ရေရွတ်ရင်းဖုန်ခလုပ်များအားနှိပ်ကာ “နှစ်သစ်ချစ်ဦးရေ …. နှစ်သစ်ချစ်ဦးရေ…” ဖုန်းအသံလေး ကြောင့် အိချောတယောက် လန့်ကာသွားမိတော့သည်။ မိမိတယောက်တည်း လမ်းထိပ်က မမမြဆီက အပြာစာအုပ်ငှါးကာ ခိုးဖတ် နေတုန်း ဖုန်းသံကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကာ “အေး ပြောမြသွေး နင်ကလည်း ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေပီးကတည်းက ငါ့ ဆီဖုန်းတောင် ဆက်ဖေါ်မရဘူး အခုဘာကိစ္စလည်း” “မမအိ ညီမလေးပြောစရာရှိတယ်” “အေးပြောလေ ” “ဟိုတယောက်လေ သိလား” “ဘယ်တယောက်လည်း နင့်ဟာက အစမရှိဘာမရှိနဲ့ ”
“မြသွေးပြောပြောနေတဲ့ ခပ်ချောချာလူကြီးလေး” ” အော်အေး သိပြီသိပြီ ဘာလည်း နင့်ကိုဟိုက ဖင်လာနှိုက်သွားလို့လား” “ဟာ အစ်မအိကလည်း ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး” “ဟား.. ကောင်မလေး ရှက်သွားပြီ ပြောပြော” “အင်း ပြောမယ် အဲ့လူကြီးလေ………” ဟုအစချီကာ ယနေ့ဖြစ်ပျက်သမျှအား တလုံးမကျန် ပြောပြလိုက်လေသည်။ “မြသွေး နင်တော့ အလိုးခံရတော့မယ် အားကျ တယ်ဟာ” “အယ်.. အမကလည်း ဘာစကားတုန်း” “ကောင်မ ခုမှလာရှက်မနေနဲ့ ညည်းခံချင်နေတာ ငါသိတာပေါ့”
သူမရှက်ရှက်ဖြင့် ဖုန်းချလိုက်လေသည်။ ပါစပ်မှလည်း ပွစိပွစိနှင့် အပျိုကြီးလင်အမြန်ရသွားမှအေးမှာ။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ပပမှာ သမီးဖြစ်သူအား လှမ်းခေါ်ကာ မြသွေးနှင့် ဒေါ်ပပ နှစ်ဦးသား ထမင်းစားကြလေသည်။ ဒေါ်ပပလည်း ကျဆင်းလာသော စီပွားရေး အခြေအနေကြောင့် ယခင်လို အသုံးအစွဲမကြီးတော့ပဲ ချိုးခြံချွေတာကာ မိမိခင်ပွန်းရှိစဉ်က ကိုယ်ပိုင် အငှါးကားလေးအား ခင်ပွန်း၏တပည်ရင်း အေးမောင်အား နေ့စဉ်ပေးစနစ်ဖြင့်ပင် ငှါးရမ်းကာ နေထိုင်စားသောက်ရသည်။ ကားမှာလည်း အိုနွမ်းကာ ဟိုဟာပျက်လိုက် ဒီဟာပျက်လိုက်နှင့် စားဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ပင်။
မင်းမင်းခန့်တယောက် ရွှင်လန်းတက်ကြွစွာဖြင့် မှတ်သားလာသော ဖုန်းနံပတ်အား ဖုန်အတွင်ရိုက်ထည့်ကာ သူမလေးအား ‘အရမ်း ချစ်သွားပြီ ချာတိတ်ရယ်’ ဟု မက်ဆေ့ပိုလိုက်လေသည်။ သူမလေးဟု မှတ်သားထားလေသည်။ မြသွေး၏ နာမည်ကို သူမမေး လိုက်ခြင်အား တကိုယ်တည်း ရေရွတ်ကာ ဘာပဲဖစ်ဖြစ် ဖုန်းနံပတ်ရခဲ့ပြီပဲ ဟု ကျေနပ်ကာ ကဗျာတိုလေးများ ပန်းပွင့်လေးများအား သူမအား ဆက်သရန် ရှာဖွေနေတော့သည်။
အချိန်မည်မျှကြာသွားသည်မသိ ဝမ်းဗိုက်မှ ဆာလောင်မွတ်သိတ်မှုဝေဒနာကြောင့် ဟင်းမချက်နိုင်တော့ပဲ အသင့်စား အမဲသားနှပ် ဗူးအားဖောက်ကာ ထမင်းနှင့် စားသောက်လိုက်တော့သည်။ ထမင်းစားပြီးသည်နှင့် အားသွင်းထားသောဖုန်အားဖြုတ်ကာ ‘ချာတိတ်လေး သတိရနေတယ်၊ ချာတိတ် ဘာလုပ်၊ ကိုယ့်ကို ဘာလို့စာမပြန်ရတာလည်း ချာတိတ်ရယ်’ သူမနေနိုင်ဖြစ်ကာ သူမ လေးထံသို့ ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့သည်။ “နင်ထားခဲ့မှာလား နင်ရက်စက်စက်မှာလားလေ…” ဝိုင်းလေးရဲ့ သီချင်းတေးသွားလေး ကြောင့် သူပင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ ဘာကို လွမ်းလို့လွမ်းမှန်ပင် မသိဖြစ်မိသည်။ ဇွဲမလျှော့ပဲ ဒုတိသအကြိမ် ဆက်ခေါ်ရာတွင် တော့ ချိုသာသောအသံလေးကြောင့် သူပျော်မိသွားတော့သည်။
“ဟဲလို ” “ညီမလေး အစ်ကိုယ့်ကိုမှတ်မိလား” “အမေမအိပ်သေးဘူး ဒါပဲနော်” “ဒါဆို မက်ဆေ့ပြန်ပို့လေ နော် နော်” တဘက်မှ တိတ်ဆိတ်သွားကာ ခဏအကြာတွင်တော့ သက်ပြင်းချသံနှင့်အတူ ညှိုးငယ်သော အသံလေးဖြင့် “ဘေလ်မရှိလို့ပါ ကိုကြီးရယ်” ဟု ပြေားရင်း ဖုန်းချသွားတော့သည်။ သူအရမ်းပင် သနားသွားကာ ချက်ချင်းပင် သူမဖုန်းလေးထဲသို့ ငွေငါးထောင် လှမ်းလွှဲ ပေးလိုက်လေတော့သည်။ ထို့နောက် ‘အရမ်းချစ်မိသွားလို့ပါ ညီမလေးရယ် တမျိုးမထင်ပါနဲ့’ ဟု မက်ဆေ့ပို့လိုက်လေတော့သည်။
မြလေးတယောက် ပျော်ရမည်လော ဝမ်းနည်းရမည်လော ဝေခွဲမရဖြစ်နေတော့သည်။ မိမိတဘက်သက် ကြိတ်ကာ သဘောကျနေ သော ချစ်ကိုကြီးဆီမှ ဂရုစိုက် တန်းဖိုးထားမှုခံရခြင်းအတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိရသော်လည်း မိမိဘဝအတွက် ဝမ်းနည်းကာ သိမ်ငယ်နေမိတော့သည်။ ထို့နောက်တွင် အချိန်သိပ်မကြာလိုက်ပဲ သူမတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူဖြစ်သွားလေတော့သည်။ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ သည်မှာ နှစ်လပင်ပြည်တော့မည် အပြင်မှာတကြိမ်မှ ချစ်သူနှင့် တွေ့ခွင့်မရပဲ သူမ၏ပါးလေးအား နမ်းခွင့်မရရှိသေးပေ။ “ဟဲလို အစ်မ ပပ လားခင်ဗျ” “အမေရေ ဖုန်းလာနေတယ် ဦးအေးမောင်ဆီက” ဟုပြောရင်း ထမင်းဟင်းချက်နေသောမိခင်ထံသို့ ဖုန်း အားသွားပေးကာ အနားတွင်ရပ်ကာ အသာနားစွင့်နေတော့သည်။
ဒေါ်ပပလည်း စိတ်ပူသွားကာ ယခုလို အချိန် အေးမောင်တခါမျှ ဖုန်းမဆက်ဖူးချေ ကားတခုခုဖြစ်တာပဲဟု တထစ်ချတွက်ကာ ပူပန်မိတော့သည်။ မိမိတို့စားဝတ်နေရေးမှ ဤကားလေးကြောင့်သာ “အေးမောင် ပြောလေ ဘာဖြစ်လို့လည်း” ဟုစိုးရိမ်စွာဖြင့်မေးလေသည်။ တဘက်မှလည်း “အစ်မ ကျနော်သထုံကို လူသွားပို့ပြီး အပြန်မှာ ရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကို တိုက်မိလို့ ကျနော့်ကို ကျိုက်ထိုရဲစခန်းမှာ ကားရောလူရော အဖမ်းခံထားရလို့ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ထုပ်ယူပါဆိုလို့ အစ်မဆီ ဖုန်းဆက်ရတာ အစ်မရယ် ကျနော့်ကို ခုချက်ချင်းလာခေါ်ပါနော် နော် အစ်မ”
ပြောကာ ဖုန်းချသွားလေတော့သည်။ လက်ထဲတွင် ရှိစုမဲ့စုငွေလေးအား ယူကာ သမီးအား စိတ်မချနိုင်ပဲတဖွဖွမှာကာ ကျိုက်ထိုသို့ ချက်ချင်းပင်ဆင်းလာတော့သည်။ စခန်းရောက်သော် အေးမောင်အား အာမခံဖြင့်ထုပ်လို့ရသော်လည်း ကားမှာ မနက်တရားရုံး တွင် ဒဏ်ငွေဆောင်ပြီမှ ထုပ်ယူခွင့်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်လိုမှပင် ပြန်လို့မရတော့ချေယ။ သမီးဖြစ်သူအား အကျိုးအကြောင်းဖုန်းဆက်ကာ လှမ်းပြောလိုက်လေတော့သည်။ “ကိုကို မေမေ ဒီည ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့ မြသွေးကြောက် တယ် ကိုကိုရယ်”
မြင်လိုက်ရသော မက်ဆေ့ကြောင့် သူအရမ်းပင် ပျော်သွားမိတော့သည်။ အလုပ်မှပြန်ရောက်ကာစမို့ ရေမိုးချိုးကာ ထမင်းပင်မစား နိုင်တော့ပဲ ငွေသား သုံးသိန်းယူကာ သူမလေးအိမ်သို့ ထွက်လာလေတော့သည်။ အချိန်အားဖြင့် ညကိုးနားရီဖြစ်သောကြောင့် လူသွားလူလာပင် မရှိတော့ချေ။ ခြံတခါးအား မိမိဘာသာဖွင့်ကာပင် အေးအေးလူလူ သူမအိမ်လေးထဲသို့ ဝင်လာခဲ့တော့သည်။ တ ခါးဝတွင် အသင့်ကြိုနေသော ချစ်သူလေးအား ခါးမှဆွဲဖတ်ကာ အနမ်းမိုးများ အဆက်မပြတ် ရွာချလိုက်တော့သည်။ မြသွေးမှာ ဗ လောင်ဆူနေသောရင်အား ထိန်းကာပင် “အို ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလည်းကိုကိုရယ် သူများတွေ မြင်ကုန်မှဖြင့် မသင့်တော်ပါဘူး ကွယ်”
ပြောလည်းပြော လက်မှလည်းတွန်းကန်ကာ အခန်းတွင်းသို့ ဝင်ပြေးသွားတော့လေသည်။ မင်းမင်းခန့်လည်း အိမ်ရှေ့တခါးအား ပိတ်ကာကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ယာလို သဘောထားကာ သူမလေး အခန်းတွင်းသို့ ဝင်ခဲ့လေတော့သည်။ မြသွေးလည်းရှက်လွန်းလို့ စောင် ခေါင်မြှီးခြုံကာ နေမိသည်။ သူသည် သူမကုတင်ပေါ်သို့ညှင်သာစွာထိုင်ရင်း “ချစ်လေး ထဦး ကိုကိုပြောစရာရှိတယ်” ဟုပြောရင်း စောင်အားအသာဆွဲယူလိုက်တော့သည်။ “ရော့ ဒီမှာ ချစ်လေးမေမေ အမှုကိစ္စအတွက် ယူထားလိုက်နော်” “အို မယူရဲပါဘူး ပေးချင်မနက်ကျမှလိုက်သွားပြီး ကိုယ်ဘာသာပေးပေါ့”
“အင်းလေ သွားကြတာပေါ့ ခုတော့ သူ့သမီးလေးကို အမေ့ကို ယ်စာစောင့်ရှောက်ရဦးမယ်” ပြောလည်းပြော ဖတ်လည်းဖတ်ကာ မြသွေးနှုတ်ခမ်းလေးအား ငုံခဲလျှက် ချစ်ရည်ဖြာသော မျက်လုံးရွဲကြီးများအား စိုက်ကြည့်ရင်း နှစ်ကိုယ်တူ အသံတိတ်စကားများ ပြောနေကြသည်။ ၁၈ နှစ် ပြည့်ရန် လပိုင်းသာလိုသေးသော အပျိုဖေါ်ဝင်ကာစ မြသွေး ရင်အစုံပေါ်သို့ သူ့လက်ချောင်းလေးများက ဖွဖွအုပ်ကာ ပွတ်သက်ကျီစယ်မှုကို မြသွေးခင်ဗျာ အူထဲအသည်းထဲကပင် လှိုက်ဖိုမောနေမိတော့သည်။
“အို…. ကိုကိုရယ် မြသွေး ရင်တွေတုန်လိုက်တာကွယ်” “အချစ်လေး … ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူး ကိုကို တာဝန်ယူပါတယ်” “မြ သွေးကြောက်တယ်..” “မကြောက်ပါနဲ့ အစပိုင်းလေးပဲ နည်းနည်းလေးနာမှာပါ” ဟု ပြောလည်းပြော အမွေးကြဲလေး အနည်းငယ် သာ ပေါက်နေသော ဖုတ်ဖုတ်လေးအား ပျေလျှော့နေသော ထမီကြားက လက်ချောင်းကလေးများနှင့် အထက်အောက် စုန်ဆန်ကာ ပွတ်သတ်နေတော့သည်။ “အား….. ကိုကိုရယ် မြသွေးလေ ယွစိယွစိနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိတော့ဘူး ကိုကိုရယ် ..” “ဘာမှမ ဖြစ်ဘူး မျက်လုံးလေးအသာမှိတ်ထား သိလား …”
“ဟုတ်ကဲ့ ကိုကို …” “လိမ္မာလိုက်တာ အချစ်လေးရယ် ” တလွှာချင်းဆီ ချွတ်ချထားသော အဝတ်မဲ့ မြသွေးခန္ဒာအား နို့သီးမှ စုန် ဆင်းကာ မို့မို့ဖောင်းနေသော ဖုတ်ဖုတ်လေးရဲ့ အက်ကွဲကြောင်းလေးကို လျှာထိပ်ကလေးနှင့် “အား…. ရှီးး…ကိုကို ဘာလုပ်နေတာ လည်း မြသွေး မခံနိုင်တော့ဘူးကိုကိုရယ် … လိုးမှာဖြင့်လိုးပါတော့ မြသွေးဟာလေး ကွဲရင်ကွဲသွား စမ်းပါစေ ကိုကိုရယ် ထိုးထည့် လိုက်ပါတော့ …” “မလေားနဲ့လေ အချစ်ရယ် ခဏလေးပါ နော် ” “အား… ရှီး….” ရှာထိပ်လေးပင်မက လျှာအပြားလိုက်ပင် အထက်အောက် ဘေးဘယ်မကျန် လျှက်ပေးရင်း သူမ စောက်ရည်အား တဂွတ်ဂွတ်နှင့် မျိုချပလိုက်သည်။ မျက်နှာတခုလုံးလည်း ပေကျံနေသောကြောင့် ရေချိုးခန်းသို့ဝင်ကာ မျက်နှာသစ်လိုက်သည်။
မိမိတောင်မတ်နေသောစံချိန်မှီ လီးအား ပြောင်နေအောင်ရေထက်ဆေးလိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ်တွင် ကိုယ်ဗလာနှင့် နုံးခွေနေ သော သူမအားကြည့်ကာ လီးမှာတောင်သထက် တောင်လာတော့သည်။ “အချစ်ကလေး ထ ကိုကိုလီးလည်း စုပ်ပေးဦးလေ” “ဟင် မြသွေးမှ မစုပ်တတ်တာ ကိုကိုရယ်” “လာ ကိုကိုသင်ပေးမှာပေါ့” သူမလက်ညှိုးလေးအား နမူနာစုပ်ပြကာ နှုတ်ခမ်းဝ လေးအား လီးဖြင့်တေ့ထားလိုက်သည်။ သူမသည် ယခုမှပင်လီးအား သေချာမြင်ဖူးတော့သည်။ စောစောက ကုန်ခမ်းသွားသော အားအင်များချက်ချင်းပြည့်ဝလာကာ ကိုကို စိတ်ကျေနပ်အောင်ပင်မကပဲ စေတနာပါပါဖြင့် အားရပါးစုပ်ပေးနေမိတော့သည်။
“အား….အား….ကောင်းလိုက်တာ မြသွေးလေးရယ် အား… ကိုကို မရတော့ဘူး မြသွေး ပက်လက်လှန်ပြီး အဖုတ်လေး ဖြဲထားပေး နော်” အချစ်စိတ်နှင့် ကာမစိတ်ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အပျိုလေးမှာ မရှက်ကြောက်တော့ပဲ ပေါင်နှစ်ဖက်ကားကာ မိမိအဖုတ်လေး အား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲထားသည်။ မှိုဖူးကြီးပမာ မင်းမင်းလီးကြီလည် သူမဖုတ်လေးအား အထက်အောက်ပွတ်ရင်း သူမအရည် ကြည်လေးများအား လီးထိပ်ကိုစိုရွှဲလာသည်နှင့် တဖြေးဖြေးချင်းဖိသွင်းရာ “အား….ကိုကို မဆံ့ဘူးထင်တယ်” ပူနွေးနွေးလီချောင် ကြီးကြောင့်လန်သွားကာ နှုတ်မှလည်း စိုးရိမ်ကာ တဖွဖွပြောနေတော့သည်။
“အား…” သူလည်း ခဏမှေးကာ “ချစ်လေး…” “ရှင် ကိုကို ” “ဟိုစကားပုံကြာဖူးလား ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆံတယ်ဆိုတာလေ” “ဟုတ် ကြားဖူးပါတယ် ” သူလွှဲလိုက်သော အာရုံအား သူမအပြည့်အဝပါလာသည်နှင့် အပျိုမှေးလေးအား လိုးခွဲကာ လီးတဆုံး ပင် ထိုးစိုက်ထားလိုက်သည်။ “အမလေး… အမေရေ….သေပါပြီး….အား …နာတယ် နာတယ်” သွေးရူးသွေတမ်းဖြင့် ထအော် သောမြသွေားပါစပ်အား ဘယ်လက်ဖြင့် အသာဖိပိတ်ကာ “အရမ်းမအော်ရဘူးလေ သူများတွေကြားကုန်မှာပေါ့” မျက်ရည်များ ကြားက သူ့အားမော်ကြည့်ရင်း “အရမ်းနာတာကို ချစ်လေးကိုချစ်ရင် ပြန်ထုပ်လိုက်ပါနော် နော်..” ငိုမဲ့မဲ့အသံလေးနှင့်ပြောနေ တော့သည်။
“ခဏလေး ချစ်လေး ခဏပဲ မယုံကြည့်နေ ကိုကိုလှုပ်ပြမယ် မနာတော့ဘူးသိလား ” ပြောလည်းပြော နိုးသီးလေးအား ကုန်အစို့ ခါး ကုန်လိုက်သည်မို့ လီးမှာ လက်နှစ်လုံးခန့် ပြန်ထွက်သွားပြီး သားအိမ်ထဲ မြှုတ်နေသော လီးထိပ်မှာ အနောက်ဆို့ဆုတ်သွားပြီး သာ အိမ်ဝအား မထိတထိ လှုတ်ကစားနေမှုကြောင့် နာကျင်သည့်ဝေဒနာသက်သာကာ သူ့လီးအား အတွင်းမှ ပြန်ကာပင် ညှစ်နေမိ တော့သည်။ နိုးနှစ်လုံးအား လှည့်ပြောင်းစုပ်ယူမှုကလည်း သူမအားပို၍ပင် အရသာရှိလှသည်။ စောစောက နာကျင်မှုသည်။ တကယ်များရော ဟုတ်ပါလေစပင် ဖုတ်ဖုတ်တွင်းမှလည်း နာလည်မှုရကာ ရှေ့တိုးနောက်ငင့် တဖြေးဖြေး မှန်မှန်လေးလုပ်ပေးလာ ရာ “အားး…အင်း…ကျွတ်စ်… အီး….” အဆုံးထိဝင်သည့်အချိန်တွင်တော့
“အု. အင်း….. အား…” အရှိန်လေးရလာကာ အရည် ကြည်လေးများကြောင့် အွင်းနံရံသား အပြည့်အဝပွတ်မိနေသော်လည်း နာကျင်မှုမှာ သိပ်မသိသာတော့ပဲ တခါတခါ ခံလို့ပင် ကောင်းသောကြောင့် ခါးလေးပင်ကော့လာတော့သည်။ နှုတ်မှလည်း တိုးညှင်းစွာ “အား….အင်း..ဟင်း..ရှီး.. အား.. အင်း..ရှီး…အ ဟင်း…အဟင်း….. ကိုကိုရယ် ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ အရမ်းချစ်သွား သိလား” မင်မင်းခန့်လည်း အပျိုလေးရဲ့ အခံကောင်းမှု ကြောင်း လီးထိပ်တခုလုံး ကျင်တက်ကာ အချက်လေးဆယ်လေက် မှာပင် သုတ်ရည်များ သူမအတွင်းနံရံများသို့ ပန်းထုပ်လိုက်လေ တော့သည်။ ခံလို့ကောင်းနေတုန်မှာ ပူနွေးနွေး သုတ်ရည်များကြောင့် မင်းမင်းအား သိုင်းဖတ်ကာ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်ပြီး လောကရဲ့ အထူးကဲဆုံး ဘာနဲ့မျှ မလဲနိုင်သော ပြီးဆုံးခြင်းကာမပန်းတိုင်သို့ တက်လှမ်းနိုင်တောလေသည်။
မင်းမင်းခန့်လည်း သူမပေါ်မှာပင်မှိန်းရင်း အနာယူနေသည်။ ပြီဆုံးခြင်းရောက်သွားသော ပိပိလေး၏ ကြွက်သားများမှာ ပွစိပွစိဖြစ် နေသောကြောင့် သုတ်ရည်ထွက်သော်လည်း အနည်းငယ်သာပျော့နေသောလီးအား ဆွဲကာဆွဲကာ ညှစ်နေသောကြောင့် လီးမှာတ ဖြေးဖြေးနှင့် အားအင်ပြည့်ဖြိုးလာကာ သံချောင်းပမှာမာတောင်လာပြီး ခါးလေးလှုပ်ကာ နှုတ်ခမ်းအား နမ်းရင် ဒုတိယအချီစနေ တော့သည်။ အရှိန်လေးရလာသည်နှင့် “ချစ်လေး ခံနိုင်လာပြီလား” “ဟုတ်ကိုကို…နည်းနည်းလေးတော့နားသေးတယ်” “အင်းပါ အရမ်းကြီးဆောင့်မလိုးသေးဘူး” “ဟုတ်ကိုကို ” အချက် နှစ်ဆယ်လေက် ပုံမှန်လိုးရင်းဖြင့် သူမအား လေးဘက်ထောက်စေ ပြီး အနောက်မှနေ၍ သူမဖင်လုံးလေးအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပွတ်သတ်ရင်း ဆုတ်နယ်ရင်း အားရပါးရဆောင့်လေရာ “အား…အု. အား… ရှီး…အား…… ဟင်း….. ကိုကိုရယ် ဘယ်လိုများလိုးနေတာလည်း”
ခံကောင်းကောင်းနှင့် ဖင်လေးပင်ပြန်ကော့နေမိရာ လိုးကောင်းကောင်နှင် သူလည်း လိုးလိုက်တာ ည ၂ နာရီပင်ထိုးသွားသည်။ သူ လည်းမောပန်းလာသောကြောင့် အားရပါးရ အချက်၂၀ ခန့်လိုးဆောင့်ရာ ပြီးဆုံးခြင်း ကာမပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိလေတော့သည်။ နှစ်ဦးသား ငယ်ရွယ်သူများမို့ သွေးသားဆူဖြိုးကာ ပင်ပန်းနွမ်နယ်မှု မရှိလေပဲ ခဏသာမျှမှေးစက်ကာ ငါးနာရီလောက် တချီထဆွဲပီး ရေမိုးချိုးကာ နံနက်စာ စားသောက်ကြသည်။ မင်းမင်းခန့်လည်း အိမ်သို့ပြန်ကာ ငွေးငါးသိန်းအားထပ်ယူကာ ဒေါ်ပပ တို့ရှိရာ သို့ လိုက်လာလေတော့သည်။ ဒေါ်ပပလည်း သမီးချောလေးမှာ ငယ်သေးသော်လည်း မိမိအခက်အခဲအား မင်းမင်းခန့်ငွေနှင့်မှ သာလျှင် အဆင်ပြေချောမွေ့မည် မဟုတ်ပါလား…။ ။ ပြီးပါပြီ….။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပြိုရညျပကျြတဲ့ည